अर्थतन्त्र | malikanews.com
कास्की, २ साउन (रासस) : गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना कार्यक्रमलाई यस वर्ष थप विस्तार गर्ने भएको छ । गत वर्षमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशसभाका एक÷एक निर्वाचन क्षेत्रमा गरी ३६ गाउँमा उक्त… Read More
नारायण अधिकारी आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा काम सम्पन्न गरेर बजेट निकासा गर्ने पुरानो प्रचलन परिवर्तन हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय कामको सट्टामा हतारमा काम चलाउ गरेर बजेट निकासा लिने प्रचलन कायमै रहेको देखिएको छ । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षका ११ महीनाको हाराहारी नै असारमा मात्र… Read More
अन्य जिल्लामा वन क्षेत्र मासिएको घटना सुन्नमा पाइन्छ तर पछिल्लो दुई दशकमा दाङको वन क्षेत्र बढेको छ । यो अवधिमा करीब १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र बढेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । नदीले कटान गरिएको वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी स्थानीयवासीलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण… Read More
मलको अभाव भएपछि यहाँका कृषकहरु भारतीय बजार जान बाध्य भएका छन् । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभासदस्य भुवनेश्वर चौधरीले वर्षाको समयमा पनि मल र आधुनिक औजारबाट कृषक वञ्चित भएको बताउनुभयो । नेपालमा मल नपाएर भारतीय बजारमा कृषक मल लिन जाँदा भारतीय… Read More
तानसेन नगरपालिकाले युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो ऋण प्रदान गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले वडा नं. ८ का श्रवणकुमार लम्साललाई पाँच लाखको सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न ‘अफर लेटर’ प्रदान गरेको हो । लम्सालले नेपाल बैंकबाट रु पाँच नगद पाउनेछन् । नगरपालिकाप्रमुख अशोककुमार शाही र नेपाल बैंक… Read More
शेयर बजार: नेप्से परिसूचक उकालो
धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ ।नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.४५ विन्दुले बढेर एक हजार २५९.०१ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.९७ विन्दुले बढेर २७१.२५ मा पुगेको छ… Read More
आज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस साउदी, कतार ,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ…हेर्नुहोस
8 months ago by adminअर्थतन्त्र
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा विनियम गर्दा… Read More
काठमाडौं । आज आईतबार सुनको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ६१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस अघि छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य… Read More